Ahụhụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kuki Cultivation Kukumba
Kukumba aghọwo otu n'ime isi akwụkwọ nri ndị e tinyere na nri ụbọchị nke ụmụ amaala ibe anyị. Tinyere poteto na tomato, ha na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ubi ubi ọ bụla. Isiokwu a ga-atụle mkpịsị aka, nkọwa nke cucumbers nke dịgasị iche iche, atụmatụ nke nlekọta ụlọ na akuku. Dịgasị iche iche nkọwa Nke a dịgasị iche iche e bred site Russian breeder Shefatov V.
Ebe dị iche iche na-eche nche: usoro nchịkwa pesti
Ebe kwesiri ntukwasi obi kwesiri ileba anya na otu n'ime ihe ndi ozo di ize ndu nke na eme ka ihe ubi buru ibu di iche iche. N'isiokwu a, ị ga-achọta ihe omimi zuru ezu banyere otu esi amata ụdị pesti a na otu esi enye usoro mgbochi kwesịrị ekwesị mgbe ụmụ ahụhụ ndị a na-awakpo akwa gị.
Esi eme ka uzo bia n'ulo
Na obodo ndị oge a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla. Eziokwu a na-enye ọṅụ na-akọwa ọnụnọ nke microwaves n'ime ụlọ na Wi-Fi, na site n'ịhapụ omume nke ichikota na starch diluted na mmiri, na gburugburu ebe obibi, nakwa na njedebe nke ụwa, na ọtụtụ puku ihe kpatara ya. Otú ọ dị, e nwere ndị na-ewe iwe. Ma ọ bụrụ na n'otu oge mara ezigbo mma, a ga-achọta onye ọbịa isii na-atụghị anya ya na tebụl okpokoro ma ọ bụ n'ebe ọzọ, ị ga - achụpụ ya na ndị ikwu ya n'oge kachasị anya.
Ebe a na - agwọ ọgwụ: jiri ọgwụ na ọgwụgwọ cancer
Usoro ọgwụgwọ na nkà mmụta ọdịnala akwụsịghị iju. Okwu ahụ abiala zhukoglovaniya, na ụdị ndụ ahụ. Anyị na-ekwu okwu banyere ndị dọkịta witch, ma ọ bụ ndị na-agwọ ọrịa, ndị, dịka ndị na-agwọ ọrịa si agwọ ọrịa, nwere ike ịlụ ọgụ ọbụna dịka ọrịa ndị dị egwu dị ka ọrịa cancer na ọrịa AIDS. Nkọwa nke ndu Na ọdịdị - ọ bụ obere nwa ahụhụ naanị 5 mm ogologo.
Ụdị "ndụ dị ndụ" ma ọ bụ ụdị nke bishọp
Ihe kachasị mkpa maka idebe Tula geese n'ụlọ
Egwu erimeri maka oyi: ezi ntụziaka
Ụdị dị iche iche (agbụrụ) nke swans
Chickens Meat Chicken: Ịmalite, Nlekọta na Nzụlite
Ihe mejupụtara mejupụtara chemical na calorie nke carrots: gịnị kpatara o ji dị mkpa ịmata? Kedu otu esi eri akwukwo nri iji nweta vitamin A?
Ụkpụrụ nke na-arịwanye elu na ubi gị
Kedu ka esi enweta ihu ọma na ọnwa oyi? Atụmatụ maka basil na-eto eto na windowsill